mashandisiro ekugovana padyo (airdrop yeApple)
Kuru Nhau & Ongororo Mashandisiro ekushandisa Kugovana padyo (AirDrop yeApple)
Mashandisiro ekushandisa Kugovana padyo (AirDrop yeApple)
Gore rino, Google pakupedzisira yakasarudza kupindura Apple & apos; s AirDrop chimiro. Kana iwe uri fuzzy pane iyo ruzivo - AirDrop inoita kuti ikurumidze uye nyore nyore kune Apple zvishandiso zvekugovana mafaera pakati pavo. Ingosarudza AirDrop kubva kumenu yekugovana uye sarudza chishandiso chaunoda kutumira kwairi .
Zvakanaka, Sharing Yepedyo yeApple chinhu chakafanana chaizvo. Paunosarudza kutumira faira nenzira iyoyo, foni yako inotanga kuburitsa chiratidzo cheBluetooth Low Energy kuti ichatorwa nemamwe mafoni pedyo. Ivo, zvakare, vanokurudzirwa kuti vabvume kubatana. Yekukurumidza uye yakapusa kuendesa, iyo inogona kushandisa Wi-Fi yakananga, yako data kubatana, uye Bluetooth kuti uwane yakanakisa kumhanya kwayinogona. Hapana chikonzero chekuisa kune iro gore kana kushandisa iyo clunky 'let & apos; s kuenzanisa edu eNFC machipisi chaizvo' nzira.
Ini ndinowana sei Kugovana Kwepedyo?
Nhau dzakanaka ndedzekuti Kugovana Kwepedyo kwatanga kuburitswa kune veruzhinji uye kuchave kuwanikwa panhare dzinomhanya Android 6 uye pamusoro. Ehe, iwe unoverenga izvo chaizvo, Google ichawedzera Kugovana Kwepedyo kwemafoni anga asiri kugamuchira chero hukuru hukuru kwemakore mana ikozvino. Iyo & apos; chikamu chePakeji YeMasevhisi package, zvinoreva kuti inofanirwa kuuya kuburikidza neyekumashure-kwe-machira ekudzosera kufoni yako.
Isu takaiyedza pane mashoma mafoni uye kunyangwe yedu yekare Galaxy S7 Edge ine Android 7 inayo! Zvino, hazvishande & apos; hazvishande zvisina mutsindo izvozvi. Kuwana mazera ekare eApple kuti atambe zvakanaka nefoni nyowani pano dzakaburitsa zvimwe zvinokanganisa kukundikana. Asi isu tinofungidzira kuti kuchine mamwe makinks anoda ironing kunze uye Google inoziva izvi - nekukurumidza kana kuchinjisa kukatadza, iwe unokurudzirwa kuti uedze kechipiri. Mazhinji edu & apos; kuyedza kwechipiri 'kwakabudirira. Nekudaro, kana iko kuchinjisa kukatadza kechipiri kutenderera, iwe unobva wakurudzirwa kutumira iyo mhosho yekukanganisa kuGoogle. Zvichida - timu yeevs yakamirira kuona kuti ingagadzirise sei nyaya.
Mashandisiro Ekushandisa Kugovana Kwepedyo?
Ingo tapota & apos; share 'pane iyo faira iwe yaunoda kutumira, wobva wasarudza padyo Kugovana (iyo diki-inotaridzika icon). Kana ino iri nguva yako yekutanga kuishandisa, iwe unozokurudzirwa kugonesa sevhisi.
Kugovera padyo kunoda iyo foni & apos; s Wi-Fi, Bluetooth, uye Nzvimbo kuti ive inogoneswa. Kana iwe uriwe uri kutanga kuchinjisa, foni yako inokukurudzira kuti uvabvumire (inogona kukuitira iwe kana ukabaya 'bvuma'). Kana iwe uri iwe uri kugamuchira, ita shuwa kuti Bluetooth uye Nzvimbo yakavhurwa. Zvikasadaro mutumwa haatombo & maapos; ona 'mudziyo wako. Kana nguva & apos yekuchinjisa, Yekugovana Kugovana ichapa kuti ikwanise iwe Wi-Fi.
Zvisinei, nekukurumidza kana izvo zvinodiwa zvichinge zvasangana, kugovana mafaera inzira yekeke. Kana mutumwa angotangisa kuchinjisa, iye anogamuchira anozokurudzirwa kuita kuti foni yavo ioneke, uye obvunzwa kana vachinyatsoda kugamuchira iyo chaiyo faira yavari kutumirwa. Iyo yekubatanidza yakavharidzirwa uye hapana data rekubata pachako rinotamiswa pakati pemidziyo.
Ndekupi iko Kwekugovana menyu?
Iwe unogona kuvhura iyo Yepedyo Kugovana marongero kana iwe uchida kudzima iyo ficha kana kana iwe uchida kuchinja ako epachivande marongero (semuenzaniso - iwe unogona kuzviita iwe pachako kuti uonekwe kune vako vaunofambidzana navo, saka iwe usadaro kuvimba).
Nzira iri nyore ndeye kungo nyora padyo Kugovana mune yekutsvaga bar yefoni yako & maapos; s marongero. Asi kana iwe uchida kuziva chaizvo kuti imenyu iripi - ma & apos; s mune Zvirongwa → Google → Dhivhizheni Dhivhizheni → Yakagovaniswa Kugovana
iri 32 gb ipad yakakwana
pa & t lte mabhendi
nhare yakanakisa yevashandisi vemagetsi
Zvakanakisa maapplication ekugadzira pasipoti nekukurumidza, vhiza uye ID mapikicha pane zvakachipa
AT & T & apos; s Samsung Galaxy S20 FE 5G chibvumirano chiri nani kupfuura T-Mobile & apos; s
Makondirakiti emakore maviri uye kutsigirwa nerunhare kutenga kwadzoka kuSprint
Plantronics BackBeat Go 2 Ongororo
Samsung & apos; s Galaxy Tab A 10.1 (2019) iri kutengeswa pamutero wakakura uine warandi yegore-rimwe
Akanakisa Kutenga mitengo Intel Core m3 powered Surface Pro 4 bundle ye chete $ 599 (40% yabviswa)
Mutengo weGoogle Nexus 6P uye zuva rekuburitsa muUS, UK uye EU
Vanofarira DIY vanozvigadzirira yavo nhare mbozha vachishandisa Raspberry Pi
Nzira yekugadzirisa manyore yako Nexus 7 (zvese) uye Nexus 10 kune Android 4.4 KitKat